Somaliland "Waxba nooguma darsana Dowladda Soomaaliya" | KEYDMEDIA ONLINE
Somaliland “Waxba nooguma darsana Dowladda Soomaaliya”
Nairobi (KON) - Waxaa dhawaan la filayaa inuu magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ka furmo wajigii labaad ee shirka u socda Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Gooni isku taaga ee Somaliland, kaasoo la sheegay in uu dhacayo bisha soo socata ee June.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Maamulka Somaliland Maxamed C/laahi Cumar oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya una hadlayay warbaahinada Muqdisho ayaa sheegay in dhawaan shirkani uu u furmayo labada dhinac, balse Dowlada Turkiga aysan u cayimin maalin gaar ah oo loo qabanayo shirkani Xilliga uu dhcayo.
Mar wasiirka wax laga weydiiyay arimaha looga hadlayo ayuu ku tilmaamay in labo dal oo daris ah ay u wada hadli lahaayeen u hadlayaan, wuxuuna sheegay in shirkaani wajigiisa koowaad looga hadlay sidii ay labada dal xiriir u yeelanlahaayeen.
Wuxuuna sidoo kale wasiirka sheegay in aysan jirin wax dowladda somaliya iskuugu darsaneyn maamulka Somaliland, wuxuuna sheegay in ay deeq bixiyaashu si gaar u siiyaan maaamulka soomaaliland deeqdooda.
Dhanka kale hadalka ka soo baxay Wasiir Arimaha Gudaha ee Somaliland ayaa ka xumaaday siyaasiga Caanka ah ee Ismaanciil Hurre Buubaana oo ka soo jeeda deegaanada Maamulka Somaliland Xilal heer Wasiir ahna ka ka soo qabtay Dowladahii KMG ahaa ee dalka Soo maray.
Ismaanciil Buubaa ayaa sheegay in Maamul Goboleedka Somaliland caburin ku hayaan dadka ku dhaqan Deegaanadeeda, wuxuuna tilmaamay in dad aad u farabada oo raba midnimada Dowladda soomaaliya ay ku noolyihiin Deegaanadaasi.
Wuxuuna Prof. Buubaa wax laga xumaado ku tilmaamay in labo dooladood lagu tilmaamay Maamul iyo dowladii hogaamineysay, iyadoona maamulka Somaliland ugu baaqay in aysan kala qaadin Soomaaliya iyo Somaliland.
Ugu danbeentii Wasiirkii horre ee Arimaha Dibadda Soomaaliya porf. Ismaanciil Hurre Buubaa ayaa sheegay in shirka ka dhacaya dalka Turkiga uu yahay mid looga hadlaya sidii Somaliland u ilaabi laheyd gooni isku taaga, wuxuuna tilmaamay in ay aad u wanaagsan tahay maamulka Somaliland oo ka gudbaan gooni isku taaga aan danta ugu jirin Ummadda Soomaaliyeed.
Keydmedia Online Xafiiska Muqdisho.